Nicole, duufaantii afar iyo tobnaad ee kuleylaha ka sameysma Badweynta Atlantik | Saadaasha Shabakadda
Waxay umuuqataa in duufaanada kuleylaha aysan bixin doonin xabad joojin. Duufaanta Matthew ayaa wali shaqeyneysa, duufaanta kuleylaha ayaa sameysay shalay Nicole, waqooyi-bari Puerto Rico. Waxay u socotaa waqooyi-galbeed, mana muujineyso wax khatar ah xilligan, waxaana la filayaa in xaaladdu ay sidaas ku sii socoto.
Dabaylaha ugu badan ee la duubay waxay gaareen xawaare gaaraya 85km / saacaddii, wuxuuna socdaalaa 13km / saacaddii.
Duufaanta waxay ku taal meel qiyaastii 840 kiilomitir u jirta caasimadda Puerto Rico, San Juan. Khubarada ayaa aaminsan in ma jiri doonaan isbeddelo badan oo xoog ah labada maalmood ee soo socda, maaddaama Duufaanta Matthew ee dabaysheeda ay ka hortagi karto inay taasi dhacdo, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka Wunderground.
Waqtigaas ka dib, Nicole waxay noqon laheyd diiqad kuleyl ah, taasi waa in la yiraahdo, duufaan ka soo baxday biyaha kuleylaha, oo leh dusha sare oo habeysan oo u wareegaya dhinaca ka soo horjeedka cirbadaha saacadda. Astaamahiisa waa sida soo socota:
Xawaaraha dabaysha: 0 illaa 62km / saacaddii.
Cadaadiska dhexe: in ka yar 980 mbar.
Waxay sababi kartaa waxyeelo daran iyo daadad, laakiin Nicole lama filayo inay ku dhacdo meelaha dadku ku badan yahay.
Sidaa darteed, xilligan duufaanka ee Atlantic wuxuu durbadiiba sameeyay afar iyo toban duufaano kulaylaha, kuwaas oo ka mid ah shan waxay noqdeen duufaano (Alex, Earl, oo waxyeelo weyn ka geystay Mexico, Gastón, Hermine iyo Matthew). Maamulka Badweynta iyo Cimilada Qaranka (NOAA) saadaaliyay sameynta 16 duufaanno, laga bilaabo Juun 1 ilaa Nofeembar 30 ee sanadkan. In kasta oo ay tahay inaad marwalba feejignaato, maadaama mararka qaar duufaano kuleyl ah ay ka baxaan xilli aan ahayn, maadaama aan awoodnay inaan ku xaqiijino Janaayo qaabeynta Alex, oo la sameeyay Janaayo 14, noqdayna xilligii ugu deg degga badnaa tan iyo 1938 .
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Nicole, duufaantii afar iyo tobnaad ee kuleylaha si ay uga sameysato Atlantic